प्रतिलिपि अधिकारको स्वामित्व निरूपण | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण प्रतिलिपि अधिकारको स्वामित्व निरूपण
on: ८ आश्विन २०७५, सोमबार ०६:५८ लेख | दृष्टिकोण
कानूनका दृष्टिमा प्रतिलिपि अधिकारको स्वामित्व सामान्यतया रचनाकारमा नै रहन्छ । तर, सधैं प्रतिलिपि अधिकारको स्वामी र रचनाकार एउटै व्यक्ति हुँदैन । त्यसैले प्रतिलिपि अधिकारको धनी भन्नु र रचनाकार भन्नु फरकफरक कुरा हुन् । प्रतिलिपि अधिकार कसले नियन्त्रण गर्ने र फाइदा लिने भन्ने कुराको नियन्ता स्वामित्व भएको व्यक्ति नै हुन्छ । प्रस्तुत अङ्कमा स्वामित्व निरूपणका विभिन्न अवस्थाबारे चर्चा गरिन्छ ।
जसले आफ्नो सृजना वा रचनालाई अन्तिम रूपमा कुनै माध्यममा स्थिरीकरण गर्छ त्यही व्यक्ति रचनाकार हुने भए तापनि कहिलेकाहीँ रचनाकार को हुने भन्ने कुरामा विवाद पनि पर्न सक्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै सुझाव दिन, विषयवस्तु थपघट गरिदिने वा सरसामग्री उपलब्ध गराइदिने व्यक्ति रचनाकार हो कि होइन ? पारिश्रमिक लिएर आंशिक रूपमा रचनामा सघाउने रचनाकार हुने कि नहुने ? धेरै जनाले मिलेर एउटा रचना तयार गरे वा कुनै कामको अलगअलग खण्ड अन्तिम रूपमा तयार पारे भने के हुने ? यस्ता प्रश्नको निरूपण गर्दा प्रतिलिपि अधिकार विचारमा होइन, अभिव्यक्तिमा रहन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ ।
विचार जसको पनि लिन सकिन्छ । कमेण्ट गर्ने, सुझाव दिने, थपघट गरिदिने, सामग्री उपलब्ध गराउने परिश्रमिक लिएर अरूको आंशिक काम गरिदिने व्यक्तिहरूले रचनाकारको हैसियत राख्दैनन् । तर, कसैले दिएको कमेण्ट वा थपघट गरिदिएको अंश नै अन्तिम अभिव्यक्ति भएको अवस्थामा सहरचनाकार हुन सक्छन् । कुनै सामग्री अन्तिम रूपमा तयार गर्दासम्म दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिले संयुक्त रूपमा काम गरेको भए त्यस्तो अवस्थामा दुवै संयुक्त रचनाकार हुन्छन् । तर, कुनै रचनाको अलगअलग रचनाकारको खण्ड वा शीर्षक अलगअलग छुट्ट्याउन सकिने अवस्थामा भने संयुक्त वा बेग्लाबेग्लै रचनाकार हुन सक्छन् । यसरी सामूहिक रूपमा भए गरेका कामहरूको स्वामित्व विशेष गरी पारस्परिक करारमा भर पर्छ । कसले कसका लागि काम गरेको हो यकिन गरी रचनाकार र रचनाको स्वामी कानूनले निरूपण गर्नुपर्छ ।
चिट्ठीपत्र, इमेल, वा अन्य आदानप्रदान गर्दा प्रारम्भिक नियमअनुसार जसले तयार पार्छ त्यही रचनाकार हुन्छ । आफ्ना सङ्कलन, प्रकाशन र पुनरुत्पादन गर्न तर कुनै संस्थामा रहेर सृजना गरिएका चिट्ठीपत्र आदि सामग्रीको अधिकार रोजगारदातामा रहन्छ । फोटोग्राफको संस्थागत रूपमा लिएको फोटोको स्वमित्व संस्थामा भए पनि त्यसको स्रष्टा फोटोग्राफर स्वयम् हुन्छ र नैतिक अधिकार उसैमा रहन्छ । कुनै रचनाका दुई वा दुईभन्दा बढी रचनाकार भएमा र गरेका काम अलगअलग छुट्ट्याउन नसकिने भएको अवस्थमा त्यसमा संलग्न सबै रचनाकारको संयुक्त स्वामित्व रहन्छ । एउटै रचनाका लागि सबैले संयुक्त रूपमा प्रतिलिपि अधिकार र नैतिक अधिकारको प्रयोग गर्छन् ।
गीत लेख्ने र लय दिने व्यक्ति सङ्गीतकार आफै भएमा दुवै साहित्यिक रचना र सङ्गीतको संयुक्त अधिकार सङ्गीतकारमा नै निहित रहन्छ । तर, दुई अलगअलग व्यक्ति भएमा गीतकारको अधिकार साहित्यकारमा र सङ्गीतको अधिकार सङ्गीतकारमा हुन्छ । ध्वनि अङ्कन संस्थाले सम्झौताद्वारा दुवैको अधिकार प्राप्त गरेको अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिले प्रकाशकसँग मात्र कारोबार गर्न सक्छ । ती दुवै जना स्रष्टाको छुट्टै स्वीकृति लिनु पर्दैन । तर, त्यस्तो प्रकाशक नभएको अवस्थामा तेस्रो व्यक्तिले दुवैबाट अलगअलग स्वीकृति लिनुपर्छ । एउटै थलोबाट प्रतिलिपि अधिकार धनीहरूको र प्रयोगकर्ताको चाहना पूरा होस् भनी रोयल्टी सङ्कलन संस्थाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तो व्यवस्था नेपालको कानूनले गर्न सकेको छैन ।
पत्रपत्रिका र सामाजिक प्रकाशनमा लेखक र फोटोग्राफरको योगदान पनि रहेको हुन्छ । एउटा विचारणीय पक्ष के छ भने कुनै समाचार सूचना र तथ्याङ्कमा प्रतिलिपि अधिकार हुँदैन । तर, ती सामग्री सार्वजनिक गरिएको ढाँचा वा सेटिङको मौलिकताको अंश केकस्तो छ भन्ने कुराले प्रतिलिपि अधिकार रहने वा नरहने हुन्छ । त्यस्तो अधिकार पनि ती योगदान पु¥याउने व्यक्तिले स्वतन्त्र व्यवसायीको रूपमा काम गरेका छन् वा संस्थाकै कामदारको हैसियतमा काम गरेका छन्, त्यसअनुसार प्रतिलिपि अधिकार फरक हुन सक्छ । स्वतन्त्र व्यवसायी भएमा सम्झौताबमोजिम गरिन्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्था वा प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित हुने रचना सम्बन्धमा तिनको लागि काम गर्ने रचयिता भएमा आआफ्नो कृतिमा नैतिक अधिकार त पाउँछन् । तर, प्रतिलिपि अधिकारको अर्थिक फाइदा लिन पाउँदैनन् । रचनाकार स्वतन्त्र व्यवसायी भएमा प्रतिलिपि अधिकार सरकारी प्रकाशनमा जस्तै सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख नगरिएकोमा प्रकाशनगृहमा वा काममा लगाउने व्यक्तिमा हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर, रचनाकार भने सम्बन्धित व्यक्ति नै हुन्छन् । नैतिक अधिकार उनैको रहन्छ । प्रकाशन गृहले सम्बन्धित रचनाकारहरूबाट इजाजत लिएर प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
संयुक्त वा सामूहिक रचनाका सम्बन्धमा हाम्रो मुलुकको कानूनले पनि पाश्चात्य मुलुकका कानूनले जस्तै सबै सहरचयितामा स्वमित्व रहने व्यवस्था गरेको छ । पाश्चात्य मुलुकका कानूनले संयुक्त रचनाको सङ्कलक एक जना भए एकै जनाको नाउँमा पनि प्रतिलिपि अधिकार हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ तर, त्यसमा समावेश गरिएका छुट्टाछुट्टै सामग्रीमा सम्बन्धित रचनाहरूको आआफ्नो अधिकार रहेछ भने सो यथावत् रहने व्यवस्था भने हाम्रो मुलुकको कानूनसम्मत नै छ । प्रतिलिपि अधिकार बहाली रहेका सामग्रीहरूमा भने सम्बन्धित स्रष्टाको पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र त्यस्तो सङ्कलन गरिको हुनुपर्छ । प्रतिलिपि अधिकार रहेका वा नरहेका तथा पूरा वा आंशिक सामग्रीलाई परस्पर समायोजन गरेर तयार पारिएको संयोजित रचनामा कम्प्युटर सफ्टवेरको सहायताबाट सृजना गरेको रचनाका सम्बन्धमा जसले कम्प्युटर चलाएर त्यस्तो रचना सृजना गर्छ उसको नाममा प्रतिलिपि अधिकार रहन्छ । कम्प्युटरमा विद्यमान रहेका अनलाइन वा सफ्टवेयर वा अन्य सामग्रीमा पहिले नै कसैको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा राखेका सामग्रीको स्वामित्व पनि स्वतन्त्र रचनाकारले सञ्जालमा राखेको भए दुवै प्रतिलिपि अधिकार र नैतिक अधिकार निजकै रहन्छ । तर, कुनै संस्था वा व्यक्तिका लागि कामदारको हैसियतमा रचना गरेको भए हार्डड्राइभ, सफ्ट डाइभ, प्रिण्टआउट वा अनलाइनबाट शेयर गर्नुपर्ने अवस्था प्रतिलिपि अधिकार रोजगारदाताको र नैतिक अधिकार भने रचनाकारको नै हुन्छ । कम्प्युटर सफ्टवेरको सहायताबाट सृजना गरिएका रचना सम्बन्धमा पाश्चात्य कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर, नेपालको कानूनमा स्पष्ट उल्लेख छैन ।